Indawo yokuhlala yaseHeathcote Contemporary Art Boutique - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yaseHeathcote Contemporary Art Boutique
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCharley
Indawo yokuhlala enesitayile, enoxolo & yabucala kwindawo egqibeleleyo, iingcango ezimbalwa ezantsi ukusuka kwi-pub yendawo kunye nesitrato esikhulu.
Ukubuyela okutofo-tofo kwesibini esisentliziyweni yengingqi yewayini ye-Heathcote, enemizila yeewayini emnyango wakho. Ubugcisa obugqwesileyo kwigumbi lakho elibanzi, iisilingi eziphezulu, ibhedi yeqonga elilingana nokumkani, ikhitshi elincinane kunye nokufakwa kwepremiyamu. Iveranda ejonge ngasemantla, ebekwe kwiigadi ezisele zimisiwe, ezikrotyiswe kuluhlu olujikelezileyo. Isithethi seBluetooth kunye ne-wifi. ISolar powered & green igxile.
Iphefumlelwe yinkcubeko yaseJapan, le ndawo izolileyo, enoxolo ifanelekile kwikhefu elihlaziyayo kwilizwe elijonga iinkwenkwezi. Imi kuphela kumgama ozimitha ezingama-50 ukusuka kwisitalato esiPhezulu saseHeathcote, kunye ne-O'Keefe Rail Trail, esona sizathu kuphela oya kufuneka uqhube ngexesha lotyelelo lwakho kukuhlola iminikelo ebanzi yommandla. Kumgama nje omfutshane ukusuka kwiindawo zewayini, iiresityu, iikhefi kunye neevenkile kunye neHeathcote Golf Club enezityalo ezikhawulezayo, eziqhutywa yinyani, iPeneagle egotywe ingca eluhlaza yi-2.6km ukusuka kumnyango wethu.
I-Heathcote yaziwa njengekhaya kwii-wineries ezingaphezu kwama-50, nganye inento ekhethekileyo yokukuhenda. Beka phakathi kweendawo ezimangalisayo, uya kufumana umtsalane woyilo kunye neengcango ezipholileyo kunye ne-rustic cellar, kwaye udibane nabenzi bewayini abanobuhlobo nabasebenza nzima.
Umbuki zindwendwe ngu- Charley
Siyazama ukuba lapha ukuze samkele iindwendwe kwaye sisoloko sifumaneka ngomnxeba ukuze sifumane uncedo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Heathcote